Vaovao - Fomba 10 hiarovana ny tranonao amin'ny Burglary
Fantatry ny rehetra fa zava-dehibe ny fitandroana ny filaminana ao an-trano. Ny karazana fiarovana azo antoka dia afaka miaro anao, ireo olon-tianao ary ny fanananao amin'ny mpamaky trano sy ireo karazana karazana vaky trano mahery setra hafa.
Soa ihany, misy zavatra maro azonao atao hanatsarana ny fiarovana sy ny filaminana ao an-tranonao. Vakio hatrany raha te hahalala ny sasany amin'ireo fomba izay atolotray.
Fakan-tsary momba ny fanaraha-maso
Ny fakantsary fanaraha-maso dia mety ho fomba iray lehibe hanamafisana ny fiarovana ny tranonao. Afaka manampy anao hahita mpangalatra mety ho avy any ivelan'ny tranonao izy io manome anao fotoana hihetsika alohan'ny hidirany.
Raha ny fakantsary fanaraha-maso dia mety hiaro ny mpamaky trano, mety hanome azy ireo hevitra ihany koa fa misy zavatra ao an-trano mendrika hangalarana. Noho izany, ny fakantsary miafina kely dia mety ho safidinao tsara indrindra.
Hamarino tsara fa ny fakantsary fanaraha-maso ampiasainao dia manome sary mazava mba hahitanao ny zava-mitranga ary hahafahanao mamantatra ireo mpanao heloka bevava amin'ny tanjona ara-dalàna raha mikasika izany.
Ampidiro ny Locks havanana
Ny hidin-trano mety dia hanampy amin'ny fampivoarana ny filaminan'ny tranonao koa. Ny hidin-trano dia omena tolotra rehefa miasa amin'ny fomba tsy ahafahan'ny varavarana misokatra amin'ny famakiana panneaux. Ny varavarankely rehetra dia tokony hapetraka koa ny hidy.
Aza avela ho sarobidy
ao amin'ny Clear View Tsy fantatrao mihitsy hoe rahoviana ny mpangalatra olona no afaka mijery ao am-baravarankely hahitanao raha toa ianao ka kandida tsara amin'ny fandrobana. Noho izany, tsara kokoa hatrany ny manafina ireo zava-tsarobidy tsy ho hitan'ny maso.
Apetraho amin'ny firavaka tsy fahitana azy eo am-baravarankely ny firavaka, solosaina finday, fitaovana, vola ary TVS lehibe. Aza avela hametraka vola be ao an-trano. Tehirizo amin'ny toerana tsy azo idirana ivelany izy ireo.
Eritrereto ny hahazoana toerana azo antoka hitahirizana zava-tsarobidy ka tsy hitan'ny mpangalatra izy ireo.
Ataovy sarotra ho an'ny rehetra ny miditra amin'ny fanananao
Tadidio fa mamorona ny mpamaky trano. Tsy fantatrao mihitsy izay mety ho hitan'izy ireo ivelan'ny tranonao izay toa fomba mety hidirana ao.
Ny downpipe dia ao anatin'ny rafitry ny rano any an-tafon-tranonao. Izy io dia mitondra ranonorana avy amin'ny tatatra mankamin'ny lalan-drano na mankany amin'ny haavo ambanin'ny tany.
Izy io koa dia mety ho fomba tsara hidiran'ny mpangalatra.
Soa ihany fa azonao atao ny manatsara ny fiarovana ny tranonao amin'ny alàlan'ny fanosotra ny tatatrao ka sarotra ho an'ny mpamaky trano ny miakatra ao aminy.
Ny vavahady koa dia mety ho mpamono. Na dia mahasosotra aza ny fandaozanao ny vavahadinao dia mety ho fomba iray tsara ilazana koa raha misy manandrana mamaky trano.
Rehefa ampiasaina miaraka amin'ny fakantsary fanaraha-maso, ny rafitra fanairana dia afaka manome fiarovana sy filaminana fanampiny ao an-tranonao.
Ny rafitra fanairana dia mampiasa sensor izay mihetsika rehefa misy hetsika mampiahiahy. Avy eo dia mandefa famantarana any amin'ny tobin'ny mpanara-maso izy ireo, ahafahan'ny mpampiasa sy ny manampahefana mahalala fa misy vonjy taitra. Ny hetsika mety dia raisina mifanaraka amin'ny karazana vonjy taitra izay hita.
Mampiasà Flora sy Fauna
Ny fefy avo iray dia afaka mitazona ny mpangalatra trano saingy azo hokapaina ara-stratejika na hiakatra mihitsy raha toa ka misy tanana manampy amin'ny mpiray tsikombakomba aminy ny mpamaky trano. Ny kirihitra lava kosa dia sarotra kokoa ny manapaka sy miakatra azy. Raha manana tsilo izy ireo, ny fiakarana ambonin'izy ireo dia mety ho traikefa maharary koa.
Ny ala mikitroka dia fomba tsara hanafenana ny ivelan'ny tranonao koa, noho izany ny mpamaky trano dia tsy afaka mijery ao anatiny sy mahita ny zava-tsarobidinao.
Tsy misy mampatahotra mpangalatra toy ny alika mpiambina. Raha saika ny alika mirongatra rehetra dia ampy hanakanana ny mpangalatra, azonao atao ny matoky fa manao izay rehetra azonao atao ianao mba hampitomboana ny filaminan'ny tranonao amin'ny alàlan'ny fahazoana ny iray amin'ireto karazana ireto:
Ianao koa dia hanome trano alika tsara alohan'ny hanomezanao ny fianakavianao namana mahafinaritra.
Mazava ho azy, raha tsy aleonao miatrika ny andraikitra amin'ny alika dia azonao atao ihany koa ny manana rakipeo alika mivoaka rehefa mandeha ny asa mampiahiahy.
Ataovy mieritreritra ny mpamaky trano fa ao an-trano ianao rehefa tsy eo
Ny trano foana iray dia manasa ireo mpamaky trano indrindra. Soa ihany, misy zavatra azonao atao mba hanomezana ilay mpamaky trano ilay fiheverana ao an-tranonao na dia tsy eo aza ianao.
Ataovy sary ny lambam-baravarana sy ny lamba firakofana ary apetaho ny jiro sy ny onjam-peo mba hanomezana endrika hoe olona ao an-trano. Ny famelana fiara mijanona eo amin'ny arofanina dia fomba iray hafa mahomby hiheverana ny mpamaky trano fa ny trano nobodoina.
Aza manao fanambarana ampahibemaso fa hivoaka ny tanàna ianao
Amin'izao andro izao, ny tsirairay dia tia mampiasa media sosialy hitazomana ny namany sy ny olom-pantany ho ambony amin'ny fiainany mahafinaritra. Na izany aza, ny fanambarana fa hivoaka ny tanàna ianao dia mety ho fomba tsara hampirisihana ireo mpamaky trano hiditra ao an-tranonao. Na dia mieritreritra aza ianao fa feno sakaiza azo itokisana ny tambajotram-pifandraisanao dia tsy fantatrao mihitsy hoe iza no hahita ny hafatrao ary mora ho azy ireo ny manara-maso ny mombamomba anao.
Fantatro fa mety ho faly amin'ny dianao ianao fa manandrana tsy mifampirehareha imasom-bahoaka. Tsara ihany koa ny tsy mandefa ireo sary fialantsasatra ireo alohan'ny hiverenanao.
Ampahafantaro ny serivisinao mailaka sy ny polisy rehefa handeha hanao fialantsasatra ianao
Rehefa any ivelan'ny tanàna ianao dia hanomboka hipetraka ao amin'ny boaty mail anao ny mailakao. Raha misy mpangalatra mahita an'io dia io no fomba mety indrindra hampahafantarana azy fa tsy misy olona mipetraka ao an-tranonao. Noho izany, tsara kokoa ny mampiato ny serivisy rehefa mivoaka ny tanàna ianao. Aza asiana fanaterana mandritra izany fotoana izany.
Raha mila fiarovana fanampiny, ampandreneso ny polisy fa ho foana ny tranonao.
Tranga mahazatra loatra ny break-ins. Soa ihany, ny tompon-trano dia afaka manao zavatra maro hanamafisana ny fiarovana sy ny fiarovana ny tranony. Na izany aza, ny fametrahana fakantsary fanaraha-maso dia vahaolana tsara foana hitazomana ny fakam-panahy.